Ogandà : Ny olan’ny vondrom-piarahamonina no ho fototry ny tantara an’onjampeonay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Janoary 2020 3:11 GMT
Fanavaozambaovaon'ny tetikasa iray vatsian'ny Rising Voices
Fikarohana teny an-kianja nataon'ny Tranon'ny Teknolojian'ny Teatira (TTH). Sary an'ny TTH.
Taorian'ireo volana telo nanaovana hetsika tany alohan'ny tena fametrahana azy, tafiditra amin'izany ny fanandramana mamokatra votoaty, ny fanatonana ireo mpanapakevitra isan-tsokajiny momba izay ho lohahevitra hatao laharampahamehana, ny fanaovana soritsoritry ny tantara sy ny famantarana izay torohay ilaina, dia nomen'ny Theatre Technology House (Tranon'ny Teknolojian'ny Teatira) fitaovana sy fahalalàna fototra ho entina miasa ihany nony farany ilay ekipa hisahana ny famokarana andiany roambinifolo iresahana rariny sôsialy, ny fahaiza-mitantana ary ny fahombiazan'ny fifidianana demaokratika ho alefa amin'ny onjampeo.
Mpikaroka avy ao amin'ny Tranon'ny Teknolojian'ny Teatira no nanentana nandritra ireo andro roa nanaovana fiofanana, ny 18 sy 19 Aogositra, Gira Emmanuel ary ny ekipa mpamokatra Tantara an'onjampeo avy amin'ny Radio Wa 89.8 FM, onjampeom-piarahamonina handefasana ilay fandaharana atsy aoriana. Nandritra io fiofanana io, mpikambana 28 avy amin'ilay tarika no nofanina, tao ny mpandrindra, mpanoratra sy mpamokatra ary hatramin'ireo mpilalao an-tsitrapo hamokatra ilay tantara an'onjampeo ifampizaràna ao anaty vondrom-piarahamonina, tantara iray halefa amin'ny onjampeo nomerika haparitaka amin'ny Septambra 2014.
Nivoaka avy tamin'ilay fiofanana momba ny fanangonana raki-kevitra notarihan'ny tarika mpanorina ilay tetikasa, nifampiresahana sy nohalalininaa tamin'ilay fotoam-piofanana ireo hevitra avy amin'ny vondrom-piarahamonina navorin'ny tarika mpanao fikarohana nanomboka tany amin'ireo hetsika teny an-kianja tany Abongomola sy Aduku, ao amin'ny distrikan'i Apac [misy distrika 112 ao Ogandà, mitsinjara ho faritàny sy fivondronana, jereo ny sarintanin'ny distrikan'i Apac]. Avy amin'ireo vokatra azo teny an-kianja no ahafantaran'ilay tarika mpamokatra fandaharana izay lohahevitra mahaliana heverin'ny vondrom-piarahamonina fa ilaina katrohana mifanaraka amin'ny filàn-dry zareo (ireo filàna hahazo vaovao ho an'ny olontsotra).
Fakàna hevitra notanterahan'ny tarika avy amin'ny Tranon'ny Teknolojian'ny Teatira. Sary an'ny TTH.
Ireo hevitra nangonina teny an-kianja dia nampiasaina hamaritana ny votoatin'ny fampiofanana. Tao anatin'ireny hevitra voaangona ireny : ny zavamisy hoe izany fifidianana demaokratika izany dia mipetraka ho nofinofy ihany ao anatin'ny fiarahamonina misy ilay olontsotra, sosokevitra momba izay hahafahana mamadika ny fifidianana ho firoboroboana ara-toekarena ho an'ireo mponina am-bohitra, ny hatsaràn'ny resaka fahasalamàna sy ny fampianarana ho an'ny daholobe. Raha fotokevitra iraisana sy ahitàna tombony ao anatin'ny teoria sy ny fomba fijerin'ny olompirenena tsotra momba ny demaokrasia, dia tsy araka izany, raha ny vokatry ny fanadihadiana, ny fanehoankevitry ny olona, fa any anatin'ny fomba fijery mahazatra, ny demaokrasiam-pifidianana dia ikendrena hanomezana fahafahampo ireo filàna sy tombontsoan'ny mpitondra ara-pôlitika sy ireo mpiaradia akaiky amin-dry zareo. Mijanona ho resabe fa tsy asa ireo tombontsoa sôsialy sy toekarena tokony ho takalon'ny vatom-pifidianana.
Ireo mponina ao Abongomola nohetsehan'i Joel Obwolo, mpanao gazety ao an-toerana sady mpanangona vaovao ao amin'ny Radio Wa 89.8 FM no manome sary mazava tsara momba ny dikan'ny atao hoe demaokrasia sy ny fahaizana fitantanana ho an'ireo olompirenena tsotra. Amin'ny fampiasàna sarinteny momba ireo retsika dimy ananan'ny olombelona; lehilahy izay no nilaza hoe ny fihainoana no tena ilain'ny demaokrasia sy ny fahaizana mitantana fa tsy ireo retsika rehetra akory. Tsy hitan'ireo olompirenena hotsapaina, hofofonina, hojerena na hanaovana andran-tsiro izy ireny. Be tabataba ny demaokrasia, be siotsioka sy manafintohina ary tsy misy dikany ho an'ireo olompirenena tsotra. Io sy ireo hevitra hafa marobe no nanampy ireo tarika mpanao fikarohana mba hitanisa fanontaniana maro napetraka tamin'ireo manampahaizana pôlitika, toekarena ary ireo misahana ny fitantanana.
Fanontaniana vitsivitsy notsoahana avy amin'ny valin'ilay fanadihadiana :
Ahoana no hahafahan'ny olontsotra iray hitsapa, hifofona, hijery sy hanandran-tsiro ny fahaizana mitantana sy ny demaokrasia ?
Iza no ho tomponandraikitra amin'ny fampitsapàna, fampijerena, fampanandraman-tsiro sy fampifofonana ny fahaiza-mitantana sy ny demaokrasia ny olontsotra iray ?
Inona avy ireo fahafahana sy andraikitry ny olontsotra iray hahafahany mahazo antoka fa mahatsapa, mahita maso, maheno ny fofona sy ny tsiron'ny fahaiza-mitantana ary ny vokatry ny demaokrasia izy?
Inona avy ireo vokatra sy tsimoky ny fahaizana mitantana ary ny demaokrasia ?
Hatraiza ireo fifidianana eto amintsika no azo ambara fa ara-demaokratika ?
Misy ve singa manelingelina ny olontsotra iray tsy handraisany ny tena fanapahankevitra tsara ao anatin'ny zotran'ny fifidianana?
Ny vondrom-piarahamonina iray ve – tsy misy fitsabahan'ny avy any ivelany – afaka mandray fanapahankevitra momba iray fomba tiany hitantanana azy ?
Ahoana no afaka hamadihana ireo fifidianana eto amintsika ho fandriampahalemana, rariny ary firoboroboana ara-toekarena ho an'ny vondrom-piarahamonina misy antsika ?
Ireo fanontaniana ireo sy ny maro hafa ary ny valin'izy ireny no horesahana tsirairay ao anatin'ny Tantara an'onjampeo. Ho ampiasain'ireo tarika mpanoratra ny tantara ireny fomba fijery ireny mba hamokarana sy handrafetana tantara fandefa amin'ny onjampeo haharitra efatra herinandro, miainga avy amin'ireny votoaty ireny.